तपाईंको भाग्यमा के लेखेको छ आजको राशिफलमा ? – Pahilo Page
तपाईंको भाग्यमा के लेखेको छ आजको राशिफलमा ?
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १३:४२ 516 पटक हेरिएको
विक्रम सम्वत् २०७५ चैत २९ गते, शुक्रबार । इश्वी सन् २०१९ अप्रिल १२ तारिख । नेपाल संवत ११३९ चौलाथ्व । चैत्र शुक्लपक्ष । तिथि– सप्तमी ।
आफ्नो प्रतिफलबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् । परिस्थितिवश आँटेको काममा विलम्ब हुनसक्नेछ । सहयोगीहरूले बीचैमा हात झिक्न सक्छन् । मौका आए पनि समयमा जागरुक नबन्दा पछि परिने छ । उपलब्धिका लागि दोहोराएर काम गर्नुपर्ला । काम पूर्ण नभए पनि मिहिनेतले आंशिक लाभ दिलाउनेछ । लेनदेनमा अलि होशियार रहनुहोला ।
अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । ज्ञान र कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त होला । सुखद् समाचारले उत्साहित बनाउने छ । मिहिनेतले मानसम्मान दिलाउनेछ । बोलीको प्रभावले आर्थिक क्रियाकलापमा समेत फाइदा हुनेछ । बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना बन्नेछ । कामले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् र सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ ।
विशेष भेटघाटले काममा उत्साह बढाउने छ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ । कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । मेहनतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू पनि बढ्नेछन् ।
पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला तापनि मिहिनेतीहरूका लागि दिन फलदायी रहनेछ । टाढाका साथीभाइले काममा साथ दिनेछन् । आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनेछ । टाढाका साथीहरूसँगको भेटघाटले खुशियाली छाउनेछ । कर्जामार्फत धन जुट्नेछ । दोहोराएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम बन्नेछ । हात लागेको रकम अरूका लागि खर्च हुनेछ ।
अवसरका साथ केही समस्या समेत देखा पर्नेछन् । कामको राम्रै मूल्यांकन भए पनि आम्दानी बढाउन निकै मिहिनेत पर्नेछ । अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ । प्रतिफल हात पार्न केही समय लाग्ला । आँटेको काम बीचमा रोकिनाले आयआर्जनमा समस्या पर्न सक्छ । सरसापटमा सञ्चित धन बाहिरिनेछ भने खर्च बढ्नाले कर्जा लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
आँटले काम लिन नसक्दा पछि परिनेछ । समयको तालमेल नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ । इष्र्या गर्नेहरू सक्रिय रहनेछन् भने अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् । सानातिना काममै अल्झनु पर्नेछ । तापनि दीर्घकालीन योजना बनाएर नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने बेला छ । आफ्ना लागि जुटिदिने सहयोगीहरू पनि फेला पर्नेछन् ।
पहिलेका कमजोरी बाहिर आउनाले प्रतिष्ठामा समस्या पर्ला । सम्भावना देखिए पनि सोचेको उपलब्धि हातलागी नहुन सक्छ । आध्यात्मिक चेतनाले धर्मकर्म र सेवामूलक काममा प्रवृत्त गराउनेछ । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला । मिहिनेत गर्दा स्थितिमा सुधार आउनाले फाइदा हुनेछ । सानो प्रयत्नले कीर्तिमानी कामको यश लिने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ ।
खानपानको असावधानीले स्वास्थ्य प्रतिकूल रहला । आम्दानी रोकिनाले केही योजना स्थगन हुन सक्छन् । काम बिग्रने भयले पनि सताउने छ । पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला । गोपनीयता बाहिरिनाले पनि केही समस्या आइपर्ला । ठूलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तुसमेत गुम्न सक्छ । कमजोरीका बेला कामको चाप भने बढ्न सक्छ ।
बिछोडिएका आफन्तजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । लोकाचारका पछि लाग्दा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ । परिवारजनको साथले उत्साह जगाउने छ । अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ । व्यापार र पेसाबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आफन्तसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुराउनुहोला ।
वैधानिक प्रावधानले लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पार्नेछ । अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नु पर्नेछ । केही चुनौतीहरू देखिनेछन् । काममा सोचेको फाइदा उठाउन नसकिएला । प्रतिस्पर्धी बढ्नाले समस्या थपिएलान् । चिताएका काममा बाधा पुराउनेहरू प्रशस्तै हुनेछन् । अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्नुपर्ला । फजुल खर्चका साथै ठगीमा परिने योग भएकाले होसियार रहनुहोला ।
तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्छ । धेरै फाइदा उठाउन नसकिए पनि समस्या सुल्झनेछन् । पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ । परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ । टाढिएका आफन्त नजिकिने छन् । पुरानो सम्झौता भंग हुन सक्छ । महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला ।